16 obere akụkọ maka ndị hụrụ obere akwụkwọ n'anya | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Akụkọ mkpirikpi ama ama
Carmen Guillen | | Akwụkwọ
Akụkọ mkpirisi: okwu ole na ole maka nnukwu akụkọ.
You na-achọ ihe omuma atu nke micro micro? Oge thentanetị emeela ka akwụkwọ dị mkpirikpi ma ọ bụ nke obere dị mkpa n'etiti ndị na-agụ akwụkwọ ngwa ngwa maka ndị na-ejigide otu esemokwu na-abụghị naanị ihe mkpali na-akpali akpali, kamakwa ohere iji mepụta ụdị nke akụkọ ahụ zoro ezo. ahịrị "ma ọ bụ, na nke a, okwu.
Nke a bụ micro-akụkọ, akụkọ akụkọ nwere ike ịbụ nke ndị mmadụ lebara anya nke gụnyere akụkọ ogologo oge nke ndị dere dịka Cortázar ma ọ bụ Augusto Monterroso, bụ isi nkuku ikpeazụ nke ụdị a maka micro dinosaur ya, otu n'ime ndị ahụ obere akụkọ kachasị mma.
Mana tupu anyị ahụ ha, ndị niile ahọpụtara, anyị ga-aza usoro a na-ajụkarịkarị ma anyị na-arụtụ aka n’akụkọ micro-akụkọ. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị n’isiokwu a, alala azụ n ’ịgụ akwụkwọ.
You ga-eso m gaa akwụkwọ edemede a dị mkpirikpi (ma n'otu oge ahụ omimi) site na ndị a 16 micro-akụkọ maka ndị hụrụ nkenke?
1 Kedu ihe bụ micro-story? Ihe eji eme ihe
2 Olee otu esi eme micro-story?
3 10 obere akụkọ maka ndị hụrụ obere akwụkwọ n'anya
4 Akụkọ ndị ọzọ a ma ama
Kedu ihe bụ micro-story? Ihe eji eme ihe
RAE na-akọwa okwu microstory dị ka ndị a:
Short akụkọ: Site na obere- na akụkọ. 1. m Obere akụkọ.
Ma ọ dị mkpụmkpụ! Ọ bụ njirimara bụ isi nke akụkọ akụkọ a, nke nwere naanị ahịrị ole na ole onye edemede ga-egosipụta ihe niile ọ chọrọ ma hapụ onye na-agụ ya obi ụtọ, na-eche echiche ma ọ bụ na-enwe mmetụta nke ịgụ ihe dị mma yana nkenke. Maka nke a, enwere ewu ewu nke na-egosi otu: "Ihe ọma, ọ bụrụ nkenke, okpukpu abụọ dị mma"
Ọ bụ ezie na dịka anyị kwurula na mbụ, ọ bụ akụkọ a na-ejighị kpọrọ ihe, eziokwu dị iche. O siri ezigbo ike ide na "kwuo" n'otu oge na ahịrị ole na ole. Ọ bụ ezie na akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ akụkọ anyị nwere peeji na ibe iji mara agwa ma ọ bụ ọtụtụ, iji mepụta gburugburu, iji zụlite akụkọ ahụ n'onwe ya, na obere akụkọ anyị ga-ekwu n'ahịrị ole ma ole, ma mezuo ihe kacha sie ike ihe niile: na ọ na-enyefe ndị na-agụ anyị ihe.
Ọ dị ka ọrụ dị mfe, mana mụ onwe m na-agwa gị na ọ dịghị ma ọlị. Ọ na-ewe ọtụtụ usoro na oge dị anya maka ịme obere micro-akụkọ dịka ndị niile anyị ga-ahụ n'okpuru. Mana nke mbu, anyi ga agwa gi otu esi eme micro-story, ihe ichoro, okwu ma obu okwu ndi ozo iji zere na otu anyi nwere ike isi malite.
Olee otu esi eme micro-story?
Dịka iwu n'ozuzu, obere akụkọ ga-enwe N'agbata okwu 5 na 250, obu ezie na anyi nwere ike ichota ndi ozo, ma ha adighi agbanwe.
Iji dee obere-akuko anyi aghaghi ichefu ime ka otu paragraf kọwaa ihe putara ihe, yabụ anyi g’eme kpochapu ihe ga-abụ mmepe dum, dịka ọmụmaatụ, akwụkwọ akụkọ. Anyị ga-aga isi ihe ma ọ bụ njedebe nke akụkọ anyị, bụ nke a ga-enwe mgbanwe a na-atụghị anya ya nke na-eju onye na-agụ ya anya. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-echefu ịkọwa oke. Ofzọ a edere ga-enyere anyị aka ịchọta okwu ziri ezi, na nke a ezigbo adjective nkọwa, iji kwuo ọtụtụ ihe na obere.
Site n'inwe okwu agụpụtara, ihe anyị ga-agba mbọ bụ inye nnukwu ihe dị mkpa nhọrọ nke aha. Ọ gaghị abụ naanị aha ọ bụla, mana anyị ga-agba mbọ ime ka okwu ndị ahụ dị na isiokwu nyere aka mezue obere akụkọ anyị ma mee ka ọ baa uru karịa ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume.
Ma n'ezie, ọ bụrụ na enwere obere okwu na obere micro-akụkọ, anyị ga-anwa igwu egwu na ịgbachi nkịtị y akara edemede. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ ellipses dabere na akụkụ nke ederede anyị na-etinye ha, ha nwere ike ikwu ọtụtụ karịa ahịrịokwu zuru ezu.
Dị ka anyị kwuru na mbụ, ịme obere micro-akụkọ bụ ihe metụtara inweta usoro a ka esi eme ha ugboro ugboro. N'ihi nke a, na n'ihi na okwu ụmụ ntakịrị emebeghị nke ọma, ọ bụ ihe a na-ahụkarị n'akwụkwọ elementrị na-arịọ ụmụaka ka ha dee obere uri ma ọ bụ obere akụkọ banyere ihe. Site na usoro a anyị na-anwa ime ka ụmụntakịrị kọwaa ihe (ihe, ihe omume, wdg), jiri okwu ole na ole ha ka maara na-ekwughi ọtụtụ.
Atụmatụ 5 maka ide obere akụkọ
10 obere akụkọ maka ndị hụrụ obere akwụkwọ n'anya
Dinosaurnke Augusto Monterroso dere
Mgbe o tetara, dinosaur ahụ ka nọ ebe ahụ.
Ogo na ọnụ ọgụgụ, site n'aka Alejandro Jodorowsky
Ọ gha sẹtin gha lele adia na, ọ gha khọn rẹn. Ọ na-aga eleta ya mgbe chi bọrọ, mgbe onye ọ hụrụ n'anya kachasị ogologo
Nrọ, nke Jorge Luis Borges dere
N’akụkụ dịpụrụ adịpụ nke Iran enwere nnukwu ụlọ elu okwute, nke na-enweghị ọnụ ụzọ ma ọ bụ windo. Naanị ime ụlọ (nke ala ya dị ọcha ma yie okirikiri) nwere tebụl osisi na bench. N’ime okirikiri okirikiri ahụ, otu nwoke yiri m na-ede n’akwụkwọ odide na anaghị m aghọta ogologo abụ banyere nwoke nọ na cell ọzọ ya na-ede abụ banyere otu nwoke nọ na okirikiri ọzọ ... ihe ndị mkpọrọ dere.
77hụnanya nke XNUMX, nke Julio Cortázar dere
Ma mgbe ha mechara ihe niile ha na-eme, ha na-ebili, saa ahụ, sie ike, senti, yi uwe, yabụ ha ji nwayọ nwayọ laghachi na ihe ha abụghị.
Akwụkwọ ozi ahụ, nke Luis Mateo Díez dere
Kwa ụtụtụ, m na-aga n'ọfịs, nọdụ ala, gbanye oriọna, meghee akpa ahụ, tupu ịmalite ọrụ kwa ụbọchị, edere m otu akara na ogologo akwụkwọ ozi ebe, kemgbe afọ iri na anọ, akọwaala m nke ọma ihe mere m ji gbuo onwe m .
Curfew, nke Omar Lara
"Nọrọ, agwara m ya."
M metụrụ ya aka.
Bọket na shọvelụ, nke Carmela Greciet dere
Site na anwụ nke ngwụsị ọnwa Machị, a gbara Mama ume ka ọ wedata akpa ya na uwe nke oge anwụ site na elu ụlọ. Ọ wepụtara uwe elu, mkpuchi, nịịka, akpụkpọ ụkwụ ..., na ijide bọket ya na shọvelụ, ọ kpọpụtakwara nwanne m nwoke, bụ Jaime, onye chefuru anyị.
Mmiri zoro na Eprel na Mee niile.
Fantasma, nke Patricia Esteban Erlés dere
Nwoke m hụrụ n'anya aghọwo mmụọ. Ọ na-amasị m itinye ọtụtụ ihe dị nro na ya, kpoo ya, ma jiri ya dị ka mpempe akwụkwọ na abalị m nwere ụbọchị na-ekwe nkwa.
Obi ụtọ nke ịdị ndụ, nke Leopoldo Lugones dere
N’oge na-adịghị anya tupu ekpere ahụ dị n’ogige ahụ, otu nwoke nwere mwute nke gara ịhụ Jizọs na Filip nọ na-ekwu okwu, ebe Nna-ukwu ahụ kpechara ekpere.
Nwoke ahụ kwuru, "Abụ m Naim ahụ bilitere." Tupu mụ anwụọ, a Iụrịrị m mmanya na-atọ ụtọ, mụ na ụmụ nwaanyị esoro, ndị enyi m kpọọkwa ndị ọzọ, na-eme ihe ịchọ mma, na-akụkwa egwú. Naanị nwa, nne nne m di ya nwụrụ bụ nke m naanị. Ugbu a ọ dịghị nke m nwere ike; mẹ ndu bụ nkfuchiru Nchileke. Kedu ihe m kwesịrị itinye ya?
Onye ozi ahụ zara, "Ọ bụ na mgbe Nna-ukwu kpọlitere mmadụ n'ọnwụ, ọ na-eburu mmehie ha niile." Ọ dị ka a ga-amụ onye ahụ ọzọ na ịdị ọcha nke nwa ọhụrụ ...
–M chere ya na ọ bụ ya mere m ji abịa.
- Gini ka inwere iju ya, inyeghachila ndu gi ndu?
Nwoke ahụ sụọ ude, sị: "Nyeghachi m mmehie m."
Ana m ewere ọnọdụ ikpeazụ iji kesaa otu obere akụkọ m mbụ, ebe ọ bụ na agbanyeghị aka na nkenke, akụkọ ya na akụkọ ya n'oge ederebeghị m ụdị a. Atụrụ m anya na ọ masịrị gị:
Ọ bịara jiri eriri ahụ adabaghị.
O mere ka ọ ga n’ihu n’ịgụ ihe.
Ejiri odo odo na-eri nri na ime ụlọ ahụ. #iheanacho # akwukwo # akụkọ # obere-akụkọ pic.twitter.com/hAqNNGByu7
- Onyinye Eberechukwu (@AlbertoPiernas) April 9, 2017
Akụkọ ndị ọzọ a ma ama
Ndị a bụ ụfọdụ obere micro-akụkọ ndị enyerela ma ọ bụ mara n'oge ahụ na ụfọdụ ndị ọ bụghị ndị ode akwụkwọ ama ama. Anyị nwere olile anya na ị masịrị ha:
Ekwuru okwu ma kwuo okwu, nke Max-Aub
Ọ na-ekwu okwu, na nke ọ na-ekwu, na nke ọ na-ekwu, na nke ọ na-ekwu okwu, na nke ọ na-ekwu. Ma kwuo okwu. Abụ m nwanyị nke ụlọ m. Nwa odibo ahu na-ekwu okwu ma na ekwu okwu. Ebe ọ bụla m nọ, m ga-abịa bido kwuo okwu. Ọ na-ekwu banyere ihe niile na ihe ọ bụla, otu ihe ahụ adịghị ya mkpa. Were ya ọkụ maka nke ahụ? Ọ ga-akwụ ụgwọ ọnwa atọ. E wezụga nke ahụ, ọ gaara enwe ike inye m anya ọjọọ ahụ. Ọbụna n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ: gịnị ma ọ bụrụ na nke a, gịnị ma ọ bụrụ na, ọ bụrụ na ọ gafere. M tinyere akwa ahụ n’ọnụ ya ka o mechie ọnụ. Ọ nwụghị site na ya, kama ịghara ikwu okwu: okwu ahụ malitere n'ime ya.
Akwụkwọ ozi si n'aka onye hụrụ n'anya, nke Juan José Millás dere
E nwere akwụkwọ akụkọ na-agbanyeghị na ọ toro ogologo enweghị ike ịmalite bido rue na peeji nke 50 ma ọ bụ 60. Otu ihe ahụ na-eme ụfọdụ ndụ. Ọ bụ ya mere na egbughị m onwe m tupu mgbe ahụ, Onye Nsọ gị.
Apụl, nke Ana María Shua dere
Akụ a ahụ William Tell gbara na-akụ, gbawara apụl na-achọ ịdaba n'isi Newton ụzọ abụọ. Iv were otu ọkara nye nwaanyị ọzọ nwanyị ahụ iji nye agwọ ahụ obi ụtọ. Nke a bụ etu esi adọnyeghị iwu ndọda.
Iyi egwu, nke William Ospina dere
"M ga-eripịa gị," ka panther ahụ kwuru.
Mma agha kwuru, sị: "Ọdachi gị.
Eziokwu banyere Sancho Panza, nke Franz Kafka dere
Sancho Panza, bụ onye na-enweghị ịnya isi na ya, meriri ọtụtụ afọ, site na ịde ọtụtụ akwụkwọ akụkọ chivalric na bandit, na mgbede na n'abalị, iji kewaa ụzọ nke ee mmụọ ọjọọ ya, onye o mechara nye ya aha Don Quixote, na ọ malitere onwe ya a na-apụghị ịkọwa ya n'ime ihe ndị dị egwu, nke, n'agbanyeghị, maka enweghị ihe a kara aka, na nke kwesịrị ịbụ Sancho Panza, emerụghị onye ọ bụla.
Sancho Panza, nwoke nweere onwe ya, soro Don Quixote n'enweghị ikike, ikekwe n'ihi ụfọdụ echiche nke ibu ọrụ, na nagharịgharị ya, si otú a nweta nnukwu ntụrụndụ bara uru ma baa uru ruo ọgwụgwụ ya.
Ugogbe ahụ, nke Matías García Megías
Enwere m iko iji hụ eziokwu. Ebe ọ bụ na anaghị m eme omume ahụ, anaghị m eji ha eme ihe.
Naanị otu ugboro…
Nwunye m dinara n'akụkụ m.
N’ịnye iko ndị ahụ, elere m ya anya.
Ọkpụkpụ ọkpụkpụ ahụ dinara n'okpuru akwa akwa na-atụ m n'akụkụ, n'akụkụ m.
Ọkpụkpụ okirikiri na ohiri isi ahụ nwere ntutu nwunye m, tinyere ihe ndị nwunye m na-eji ekpuchi.
Ezé ezé ndị na-ata onwe ha na ikuku na snore ọ bụla nwere nkwonkwo platinum nwunye m.
Ejiri m ntutu ma nwee ọkpụkpụ, na-anwa ịghara ịbanye na anya anya: enweghị obi abụọ, nke ahụ bụ nwunye m.
M debere enyo anya m, bilie, jegharịa ruo mgbe ụra nyere m wee laghachi ụra.
Kemgbe ahụ, m na-eche ọtụtụ ihe banyere ndụ na ọnwụ.
Ahụrụ m nwunye m n'anya, mana ọ bụrụ na m bụ nwata m ga-abụ mọnk.
Ndị a 16 obere akụkọ maka ndị hụrụ obere akwụkwọ n'anya ha bụ ntọala maka akụkọ nzuzo ndị ahụ zoro ezo n'ụdị akwụkwọ a pere mpe, ma pere mpe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akụkọ mkpirikpi ama ama
Ihe 30 kwuru, hapụ nke gị
Daalụ maka isiokwu a n'ihi na m bụ onye na-akwado micro akụkọ. N’ezie, site n’edemede ihe odide nke m malitere ịga na 2004 ma ọ bụ 2005 na nke m sooro ọtụtụ afọ, amalitere m ide ha ruo taa.
Banyere nke kachasị amasị m, enwere m obi abụọ n'etiti ọtụtụ. Ọ bụrụ na m ga - ahọrọ, m ga - ewere "La carta", nke Luis Mateo Díez.
Amakụ si Oviedo ma nwee ngwụcha izu ụka.
Zaghachi Alberto Díaz
Berkwụ Alberto dijo
Dị ka ọ dị na mbụ, daalụ maka echiche gị Alberto. Mmakọ sitere na Alicante.
Zaghachi Alberto Piernas
Ọnye na -bụ Antonio Julio Rosselló? dijo
Ọzọkwa ihe m na-ede na-atọ m ụtọ.
Zaghachi Antonio Julio Rosselló.
Hehehehe, imee ihe i nwere ike ime 😉 Daalụ Antonio! Mmakọ.
Carmen Maritza Jimenez Jimenez dijo
Ndewo Alberto. Micro-akụkọ na-ebu echiche sịntetik nke ihe akụkọ ogologo nwere ike ịbụ. Achọrọ m ịma ma enweghị iwu ide ya, dịka ọmụmaatụ, ndọtị, agbanyeghị na echeghị m, ebe m na-ahụ ndọtị dị iche. Typedị ederede a na-amasị m, aga m eme ya.
Micro-akụkọ m kachasị amasị m bụ: Amor 77, nke Julio Cortázar dere.
Carmen M. Jimenez
Zaghachi Carmen Maritza Jiménez Jiménez
Ndewo ndi mmadu.
Micro-akụkọ bụ, dị ka ị na-ekwu, a sịntetik version nke akụkọ, nke n'aka nke nwere dịtụ iche iwu. Ihe eji eme obere okwu bu mkpirikpi ogologo ya (enweghi oke ma okwesighi igafere paragraf) na "ịgbachi nkịtị" nke akuko akuko a.
Agbanyeghi na nke gi, echere m na imuta udiri ederede obula, o buru na inwetara obere micro-akuko ma oburu na ya bu akuko.
Banyere usoro iji dee akụkọ, ahapụrụ m gị edemede a bipụtara ọnwa ole na ole gara aga ọ bụrụ na ọ ga - enyere gị aka:
Jose Antonio Ramirez de Leon dijo
Akụkọ banyere Patricia Esteban Eriés bụ ihe dị iche na akụkọ magburu onwe ya nke onye edemede Mexico bụ Juan José Arreola, «Nwanyị m hụrụ n'anya aghọwo mmụọ. Abụ m ebe nke apparition »
Zaghachi José Antonio Ramírez de León
Ndewo, José Antonio.
Amaghị m na obere akụkọ Patricia Esteban Erlés bụ ụdị. Juan José Arreola mara m nke ọma na amaghị m obere akụkọ ya. I kwuru eziokwu, ọ dị mma. Daalụ maka ịkekọrịta.
Ekele sitere na Oviedo.
Cristina Nwachukwu dijo
Ndewo Alberto. Akwụkwọ na-adọrọ mmasị ị mere.
Monterroso's bụ ikekwe ama ama ama kacha mma ama ama iji wuo obere akụkọ, mana na nhọrọ gị, m na-ahọrọ La Carta nke Luis Mateo Díaz, echere m na ọ dị mma. Na abuo, achokwara m nma nma na ibu, nke Alejandro Jodorowsky dere.
Nsutu si Madrid
Zaghachi Cristina Sacristán
I kwenyere m, n'agbanyeghị na m ga-ewere ọtụtụ (ise ma ọ bụ isii) ederede. Na nke dị na Monterroso bụ, enweghị obi abụọ, ọ kachasị ama. Jodorowsky's dịkwa m mma.
"Ana m ere akpụkpọ ụkwụ ụmụaka, ejighi ya" - Ernest Hemingway
Zaghachi El Graffo
Ndewo, El Graffo.
Agụọla m ogologo oge gara aga, echetaghị m ebe, na Hemingway micro-story. O doro anya na ọ ga-eju ọtụtụ ndị anya ịmata na enyi ahụ Ernest dere ya (onye ọ bụla jikọtara ya na akwụkwọ akụkọ ahụ).
Ọ na-emetụta m dị ka akụkọ na-atụ ụjọ dị egwu na ụgwọ dị omimi dị egwu. Ihe karịrị akarị usoro ahụ doro anya.
Matias Munoz Carreno dijo
O doro anya na ịchọrọ ide Jorge Luis Borges, mana autocorrector.
Zaghachi Matías Muñoz Carreño
Ezigbo Alberto. M na-agụ akụkọ ndị akwadoro, m kwụsịrị na abụọ; El Sur nke Borges na La noche chere ihu, nke Cortázar dere. Agwara ihu abalị nke Cortázar, 'ahapụghị m enweghị mmasị', ka a gwara ya n'ụzọ dị mfe ma dịkwa omimi. Kedu ngalaba nke Cortázar. Mgbe m gụchara ya, akọwara m na ọ bụ mgba maka ndụ tupu ọnwụ anwụ na nghọta nke nghọta. Onye ọgba tum tum ahụ maara na ọ bụ eziokwu mgbe ụfọdụ. Mana ịdaba na ahụmịhe ndụ amaghi ama, nke metụtara ogologo oge gara aga, na-eme ka anyị chee na onye ọkwọ ụgbọ ala ahụ maara ihe gbasara ọdịnala Mesoamerican, ma ọ bụ na ọ nwere ọhụụ nrọ doro anya banyere onyinye ndị Aztec nyere chi ha site n'ịchụ onye mkpọrọ na Templelọ nsọ kachasị. Onye mkpọrọ ahụ bụ ya, onye na-anya ọgba tum tum rapara na ndụ, na-alụ ọgụ megide yok mmegbu nke ọnwụ. Njem ahụ site na ọwara ahụ wee banye n'okpuru kpakpando na ọbịbịa nke ọnwụ, nke a ga-eji nkume ma ọ bụ mma mkpuchi mee, na-eme ka anyị maa jijiji. Anyị nwere ike iche na nwa amaala a bụ émigré ime mmụọ. Dabere na Cortázar, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ dị anya ma anyị dị iche na nke ndị gara aga, ọ nwere ike ịbụ "enyo ahụ iji lelee ihu anyị anya." Ọ bụ ihe atụ maka ịmekọrịta ọdịnala ahụ anyị bụ, nke ahụ bụ otu anyị si egosipụta onwe anyị na enyo.
La Noche Boca Arriba dị ukwuu 🙂 Obi dị m ụtọ na ị masịrị ndụmọdụ Carmen. Echiche kacha mma.
Ọ bụ ihe atụ maka ịmekọrịta ọdịnala ahụ anyị bụ, nke ahụ bụ otu anyị si egosipụta onwe anyị na enyo ya.
Deborah Lee dijo
Ọ dị mma ịgụ n'etiti ahịrị na iche n'echiche nke onye dere ya.
Zaghachi Debora Lee
N’akụkụ ụlọ m ka otu nwoke na-amaghị ịgụ na ide ihe, mana nwere nwunye mara mma. Daysbọchị ndị a, na nzuzo site na nwunye ya, na nhụjuanya na nchegbu m, o kpebiri ịmụ. Ana m anụ ka ọ na-asụpe okwu, dị ka nnukwu nwa, na mpempe akwụkwọ ụfọdụ nke m na-agwa ya mgbe niile ka ọ tụfuo, mana nwanyị nzuzu ahụ hapụrụ ha ka ọ gbasaghị m gbasasịa n'akụkụ ọ bụla nke ụlọ; m na-ekpekwa ekpere ka Chineke ghara ịmụ ihe.
Ndị Nwanyị Fart. Site na akwukwo bu «Urban Fables».
Pita kwuru dijo
Ezé m nọ na sink na-akagbu ọkwa ahụ ma na-akwa ákwá nke na-aghọ akwa na-agbawa agbawa. N'ihu enyo m na-eche na ụjọ na-atụ gị na nnukwu ụlọ ahịa.
N’akụkụ mmiri, n’ihu ekwentị, anaghị m echere ogologo oge. Ọ na-ada, olu gị dị ka nwatakịrị na-akpọ m ọdụ. "Nke a nwere ike ọ gaghị abụ! Chọta nwa nwoke ọgbọ gị! " Asim gi. M kwụgidere ma kụrie ezé m na olu gị dị nro nke na-eto eto n’elu mgbidi.
Anọgidere m na-ebe ákwá, mmiri.
Pedro Querales. Site n'akwụkwọ "Ichetara cayenne m nyere gị?"
Zaghachi Pedro Querales
Ọkụ ọkụ ọkụ onye ahụ na-egbu anụ
Ka ọ na-erule oge Marco, mmadụ atọ n’ime mmadụ ise na-egwu egwu agafeela. Ofda nke ịgba agba na - agba - nke ahụ bụ naanị iwu egwuregwu ahụ: ka onye ọ bụla tụgharịa ya tupu ya etinye ya n’isi - chetaara ya oke mgbachi nke igwe kwụ otu ebe mgbe ọ kụrụ ụkwụ na azụ. Marco na-enwekarị mmasị itinye ihe ize ndụ: obere, nnukwu ma ọ bụ oke, mana ọ nọ n'ihe ize ndụ mgbe niile. Ha gafere ya ihe agha - ọ dịghị arọ ma ọ bụ dị mfe, n'oge ahụ anaghị ahụta - ọ kụrụ drum na ike. Enye ama emen enye odori ke nnasia temple esie. Mgbe o weliri isi ya elu, ọ hụrụ bọlb ọkụ ahụ nke na-enwu ka ọkụ na-enwu n’ime ụlọ ahụ, ọ chetakwara mgbe o zuru bọlb ọkụ ahụ n’ụlọ site n’ebe onye na-egbu ya. Nke a bụ otú ihe ọjọọ na nsogbu a si malite. "You naghị ezu ohi bọlbụ na onye na-egbu anụ!" ndị enyi ya gwara ya. "Ee," Marco zara. N'abalị, ha gbakọtara n'ihu ụlọ onye na-egbu anụ. Marco siri na ndò ahụ wee jiri nwayọ gaa n'ọnụ ụzọ ụlọ ahụ. Nkịta si n’afọ na-agbọ ụja. Marco kwụsịrị ma chere. Nkịta gba nkịtị. Jiri nlezianya na nwayọọ nwayọọ Marco meghere obere ọnụ ụzọ ígwè, mana ọ ka na-agbanye na mgbochi ya. Nkịta kwara ọzọ. Oge a karie ogologo oge. Okporo ụzọ ọkụ nke ịgbachi nkịtị nyere Marco akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ọzọ. Ọ kwụsịrị n'ihu ọnụ ụzọ osisi ahụ wee lelee anya: "Nnọọ" kwuru kapeeti na-enwu site n'ìhè nke si n'ọnụ ụzọ mgbaka nke mgbada na-enwu. O nwekwara ike ịnụ olu onye na-egbu anụ na nwunye ya na ndị na-emekọ ihe na telivishọn. Ọ gara iku ume ma gafere onwe ya. Mgbe ahụ ọ na-ekele mkpịsị aka ya ma na-atọghe bọlbụ ọkụ. Ka ọ na-apụ, nkịta na-ebe akwa ọzọ. Ọbụna ụfọdụ kwara ákwá. Ọ kwụsịrị ma nọrọ n'ụzọ ahụ, na-ajụ oyi ma na-enweghị isi dị ka ihe oyiyi dị ndụ, ogologo oge. Ọ gụpụrụ ya ma tụba bọlbụ na-acha uhie uhie n'ime hammock nke guzobere gburugburu afọ ya ka akụkụ ala nke flannel ahụ bilie. Ọ laghachite wee pụta n'azụ ya, ọkụ nke bọlbụ na ihu ọchị ya na trophy, adịworị oyi, n'aka ya.
N'echi ya, Marco ga-aga ebe ahụ na-egbu anụ zụta nne ya ụfọdụ ọgịrịga. Onye na-egbu anụ na-ewe ezigbo iwe. Ọbara niile gbara mkpu ma bụrụ ọnụ ka ha na-egbutu ozu nke tọgbọrọ n'uko. "Ọ bụrụ na mụ ejide ya, m ga - akpukpọ ya" wee makpu mma dị nkọ wee dọwaa anụ na - akpọ oku. “Aga m achụ ya! Ee, a ga m achụ ya! Nke ahụ na-abịa azụ! Ma m ga-echere ya. ”Mgbe ahụ ọnọdụ ahụ ghọrọ ihe ịma aka nye Marco: egwuregwu nke pusi na òké. Marco chere oge kwesịrị ekwesị, ụbọchị iri na ise ma ọ bụ iri abụọ, wee zuru oriọna ahụ na-egbu anụ. N’echi ya, ọ gara n’ebe a na-egbu anụ ka ọ hụ ihe ha mere. Nwaanyị ahụ nụrụ ka ọ na-ada ji iwe: “Egburu onye ohi! O zuru oriọna m o zuru ohi ọzọ! " ọ gwara onye ahịa ya ka o ji anyụike gbue isi ezi. Ha nọrọ ebe ahụ ruo mgbe ike gwụrụ Marco nke izuru bọlb na anụ o ji egbu anụ. Otu ubochi, n’abali, o hapuru ha nile n’ime kaadiboodu n’onu uzo.
Ndị egwuregwu anọ gbara gburugburu tebụl lere Marco anya. Ka gbọmgbọ ahụ na-adị n'ụlọ nsọ ya, Marco hụrụ bọlb ọkụ ahụ - o chekwara banyere lọtrị nke Babilọn, ebe onye mmeri meriri - na mberede ọ pụọ.
Pedro Querales. Site n'akwụkwọ «Pink Sun»
Onweghi onye no ebea, oburu achicha n’ebe niile. Akpọrọ m ha ngwa ngwa ka m wee ghara igbu oge oge nri abalị ụmụ m.
Ricardo VMB dijo
Dr. Benavente, onye ọkachamara n'ihe banyere nwebisiinka, nọ na Europe na ịtọhapụ onye ahịa anyị dabere n'echiche ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ uche ya, akwụkwọ ozi ọ bịanyere aka na ya ga-atụle mkpebi nke ndị ọka ikpe, ụmụ akwụkwọ ya na mahadum, yabụ m tinyere ihe egwu Ejiri m mbinye aka nke onye ọka iwu na akụkọ m dere nke anyị ji merie ikpe ahụ. A ikpe nke imebi iwu, merie na akwụkwọ ụgha, gịnị ka ị mụtara.
Zaghachi Ricardo VMB
Jose Constantino Garcia Medina dijo
N’oké oyi ahụ na-enye aka, isi nkwọcha ahụ na-egbukepụ ka ọnwa oyi.
Studentsmụ akwụkwọ ahụ, lebara anya na usoro egwuregwu nke ofufe ijiji, leghaara nkọwa nkọwa ya anya.
Bọọdụ ahụ mere mkpesa ka oge na-aga banyere nzu nke aka ochie nwoke ahụ mere.
Jaket ya, nke iru uju, dara n’ala n’oche ochie dịka ọ dị.
Mgbe mgbịrịgba ahụ kụrụ, ha pụrụ n’eleghị ya anya. Anya mmiri abụọ gafere ha ihu na-agwakọta na uzuzu klas.
Zaghachi José Constantino Garcia Medina
Javier Olaviaga Wulff dijo
«Anya gị na-egwu egwu ya mgbe egbugbere ọnụ gị na-egwuri egwu» - Javier OW
Zaghachi Javier Olaviaga Wulff
LM Pousa dijo
Mgbe o tetara, ọ nọghị ebe ahụ.
Zaghachi LM Pousa
Luis Manteiga Pousa dijo
Anụla m na n'oge mgbanwe ọchịchị French, mgbe mmadụ tụgharịrị, isi ya, apụlarị ya n'ahụ, ka kwuru obere okwu. Mana, na nke m, ọ dị m ka m kwuru ọtụtụ.
Zaghachi Luis Manteiga Pousa
- Ay, ay, ay! - Otu onye kwuru. Onye ozo kwuru, biarue nso "gini di?" Mgbe ahụ juu.
Ihe kacha amasị m bụ nke Luis Mateo Díez, Cortazar, Lugones, Max Aub, Millás na García Megías.
Pamela Mendez Ceciliano dijo
Ihe kacha amasị m bụ iyi egwu, nke William Ospina dere, maka na enwere ike imegharị ya na obodo anyị bi, ebe ọ bụ na ọtụtụ oge anyị chọrọ ma ọ bụ mee ihe nwere ike imerụ anyị ahụ nke ukwuu, mma agha ga-egbu panther tupu ya enwe ike iri ya.
Banyere William Ospina, onye edemede a bụ onye Colombia ma merie ihe nrite Rómulo Gallegos na akwụkwọ akụkọ ya bụ "El País de la Cinnamon", nke bụ otu akụkụ nke trilogy banyere mmeri nke akụkụ ugwu nke South America. Ọzọkwa, n’etiti ọrụ ya edemede ahụ kwụpụtara na akwụkwọ akụkọ “Afọ nke oge ọkọchị nke na-abịabeghị” na-adọta uche m, n’ihi ọnọdụ ndị metụtara ya.
Zaghachi Pamela Méndez Ceciliano
Dany J. Urena. dijo
Micro akụkọ m kacha masị m bụ La carta, nke Luis Mateo Díez, ebe ọ bụ na o were m oge ụfọdụ iji gbalịa ịghọta ya, yana n'ihi na ọ nwere ọtụtụ echiche, onye edemede ahụ na-ekwu banyere ndụ jupụtara na nsogbu. nke mmadụ Obi na-adịkarị gị mma na mwute, mana ị hụrụ ụzọ dị mma iji gbochie mmetụta ndị ahụ ịga n'ihu. Ọ masịrị m n'ihi na dịka onye na-eto eto na ọnọdụ mmadụ bi, mgbe ụfọdụ mmadụ na-enwe nchekasị na ikekwe n'achọghị ịga n'ihu n'ihe ọ na-eme, mana enwere ezigbo ihe kpatara ọ ga-aga n'ihu.
Luis Mateo Diez bụ onye edemede Spanish bụ onye so na Royal Spanish Academy (RAE) kemgbe 2001 nwere ọnọdụ, ma ọ bụ oche "l". A maara ya maka akwụkwọ akụkọ na edemede ya, yana n'etiti ọrụ ya ndị a ma ama bụ Isi iyi nke Oge, Nkịtị nke Eluigwe, Akụkọ Ifo nke Mmetụta.
Zaghachi Dany J. Ureña.
JK Rowling weghachitere nwanyị cliché n'okpuru pseudonym Robert Galbraith
Akwụkwọ 8 nke ndị eze maka ụbọchị nke ndị eze. Omuma, nwa na epic